Toekarena marefo: tsy mitsaha-mitombo ny mpivarotra | NewsMada
Toekarena marefo: tsy mitsaha-mitombo ny mpivarotra
Mitombo isa hatrany ny mpivarotra eto Antananarivo sy ny manodidina any amin’ny fokontany samihafa, indrindra any amin’ireo be mponina. Karazana mpivarotra hita, misy manana taratasy ara-dalàna, fa mitombo isa indrindra koa ireo lazaina mpivarotra tsy ara-dalàna. Karazam-barotra maro, aman’alina fotsiny ny tetibola miasa aminy. Ary na ireo manana renivola matanjaka aza, mbola betsaka ny fampiasam-bola amin’ny varotra fotsiny. Tsy fihariana vaovao ny hita amin’izany fa mampitombo kosa ny hetra miditra any amin’ny fanjakana.
Mpivarotra « madinika ». Izany no tena betsaka eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Mitombo isa hatrany ireo mpivarotra PPN, hani-masaka, kojakoja madinika fampiasa an-trano, karazana “friperie”. Nanomboka ny taona 2013 hatramin’izao, tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny olona mivelona amin’ireo sokajim-barotra ireo. Salanisa, 34,8 % isan-taona, raha ny fahitan’ny sasany nanao fanadihadiana mifandraika amin’izany.
Tsy mitsaha –mitombo ny isan’ny mpivarotra, endriky ny toekarena marefo. Ho fanarenana izany toekarena izany, laharam-pahamehana andrasana ny sehatry ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny lalana, ny fitaterana sy izay fotodrafitrasa maro hafa miteraka asa.